Midowga Musharixiinta oo Warbixin u gudbiyay Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada | Allbalcad Online
Home WARARKA Midowga Musharixiinta oo Warbixin u gudbiyay Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada
Midowga Musharixiinta oo Warbixin u gudbiyay Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada
Xubnaha Midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay faah faahin guud ka bixiyeen kulankii gaarka ahaa oo ay Maanta la qaateen madaxweynayaasha shanta dowlad Goboleed ee shirka ku yeeshay Magalada Muqdisho.
Afhayeenka Midowga Musharixiina Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in Madaxda dowlad Goboleedyada ay la wadaageen Dareenka ay qabaan xaalada dalka uu ku sugan yahay & doorashooyinka aan weli heshiiska laga gaarin.
Afhayeen Daahir Geelle oo Saxaafadda kula hadlay muqdisho waxaa uu sheegay in hagar daamooyin ay soo gaareen doorashooyinka, isla markaana ay meel mari waayaan inay dhacaan uu mas’uul ka yahay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Sidoo kale Musharax Daahir Geelle ayaa Farmaajo ku eedeeyay in uu hor istaagay wax kasta oo sahli karay inay dalka doorasho ka dhacdo, waxaana suu sicad u sheegay in Madaxda dowlad Goboleedyada ka dalbadeen in kaalintooda kaga aadan ka qaataan Arrimaha doorashooyinka.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay Musharax Daahir Geelle in Madaxda dowlad Goboleedyada la wadaageen in howlaha amniga dalka laga wareejiyo Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si aysan u dhicin dhacdooyin la mid ah kuwii 19-kii Febaraayo.
Previous articleMadaxweyne Cali Gudlawe oo Dadaalo badan ku bixinaya Qilaafka ka taagan doorashooyinka Dalka
Next articleR/W Rooble oo Daah-Furay Hay’ad ka Shaqeyneysa ilaalinta Badeecadaha Dalka la keeno